Sawubona - Senziwe eSpain
Kuthunyelwe Kwi 30 Novemba, 2018 By HB
Siyakwamkela Senziwe eSpeyin Magazine, indawo apho uya kufumana yonke ingcaciso malunga nemveliso emihle yeGourmet e-Spain njengewayini, i-cheeses, i-Iberian, ioli yeoli, njl njl. Amasayithi angabonakaliyo ukutyelela, abanikazi bawo, ukukhushulwa okulungileyo, udlala kwiGran Vía kunye nokunye okuninzi.
Senziwe eSpeyin yilizwe leenkcubeko, i-gastronomy, iwayini, umculo ... Indlela yokuphila yaseSpain kunye nesikhokelo kubo bonke abafuna ukungena eSpeyin ebonakalayo, nokuba ngumkhenketho okanye njengommi weli lizwe elihle.
Ukuqala, sincoma ukuba ungene kwisitoreji kwi-intanethi ngokugqwesileyo kwimveliso yeSpeyin: www.made-in-spain.com
Udidi: A ngahlali
elilandelayo: Bodegas Navarro López
Omnye ucinga nge "Sawubona"
31 Disemba, 2018 kwi-8: 20 pm
Ukwamkela ukuphikelela oyifakayo kwiblogi yakho kunye nolwazi olunzulu olukhoyo.
Kukulungele ukufumana iblogi rhoqo emva kwexesha elingafaniyo nomhla wokuhlaziywa kwempahla.
Ngummangaliso ufunde! Ndilondolozile isayithi lakho kwaye ndiquka ukubonelelwa kwe-RSS kwiakhawunti yam yakwa-Google.
Bodega Bodegas Navarro López Pradorey Wineries Cedrillas ngqutyana Iziqithi zaseVirgin Hams El Ferial UHamu waseTuweli I-Iberian Loin yeCebo Ribera del Duero URichard Branson Ivili Sierra de Cedrillas Ivenkile yewayini Iwayini Iwayini esuka eSpain Iwayini eValdepeñas Iwayini ayinakuphelelwa Iwayini esuka eSpain IVinoteca Iwayini elibomvu